Ziyini izingozi zezikhumbuzo zokuzala: izimpawu, yiziphi izifo ezithwala, ukwelashwa
Ukufunda ukuhlukanisa izindawo zokuzalwa
I-molecule (noma i-nevus) isakhiwo esenziwe nge-pigmented esikhumbeni somuntu, esine-melanin ne-melanocyte. Kusobala ukuthi wonke umuntu unezinto eziningana noma ezincane, kodwa kuhle ukuqonda ukuthi akukhona nje ukubonakaliswa okungenangqondo kuphela, kodwa futhi izibazi zokubeletha eziyingozi ezingabangela umonakalo omkhulu empilweni yethu, ikakhulukazi - izifo ezingokwemvelo.
Ukuze uqonde kangcono ukuthi imvukuzane iyingozi, okokuqala kudingeka ukhulume nge-nevi ephephile.
I-molecule evamile ibukeka njengesikhumba esicwebezelayo esimnyama noma esimnyama. Njengomthetho, lezo zibazi zokubeletha azihambisani nesikhumba nhlobo, noma zihamba kancane. Ubukhulu bokubunjwa okungabonakali akudluli usayizi we-eraser kusuka ipensela. Enye yezinkomba zokuphepha ze-birthmark izinwele ezikhula ngokuqondile, ukulinganisa, imingcele ecacile, umbala oqhubekayo nobubanzi obungaphezu kuka-6-8 mm.
Izimpawu zamakhemikhali anobungozi
Nge-nevi ephephile, konke kuyacaca kakhulu noma kuncane, kepha kanjani ukukhomba izibazi zokuzalwa eziyingozi emzimbeni? Kulo sizosiza isithombe esingaphansi, esibonisa izithombe ze-moles ezivamile kanye ne-melanoma.
Bheka eduze izibonakaliso eziyinhloko ze-nevus engenampilo, lokhu:
I-Asymmetry. Hlukanisa indawo enemibala ebukeka ibe yizinxenye ezimbili ezilinganayo. Njengomthetho, isikhangiso sokubeletha esinempilo sizoba nokuxhumana okuphelele cishe phakathi kwe-halves yayo, futhi inkinga izoba okuphambene nayo.
Emaphethelweni we-nevus. Imingcele yemfundo enobungozi (emaphethelweni) kufanele ibe njalo, ngisho namafomu. Uma "befiphaza", bengalingani noma benesimo esingavamile, khona-ke kufanelekile ukuxhumana nodokotela wezinambuzane;
Umbala. Lapho i-birthmark okwesikhathi esithile iguqula umbala (kusuka emnyama kuya emanzini noma ngokuphambene) - kuyisignali yezinguquko ezingalungile ekubunjweni;
Ububanzi abufanele budlule ngo-6-8 mm. Uma i-speck ikhudlwana, lokhu akusho njalo izinkinga, kodwa kukhona usongo lokubukeka kwabo, ngakho-ke kunconywa ukubhalisa ne-dermatologist.
Amamaki okuzalwa engozini emzimbeni: izizathu zokwakheka
Ukuhlelwa kwezinto ezihlotshiswe nge-pigmented emzimbeni wethu kuxhomeke kakhulu ezintweni ezithinta ifa. Ingxenye engaphezulu kwengxenye yokwakhiwa kwesikhumba ibonakala emzimbeni wethu ngaphambi kweminyaka engu-25 nje ngoba ihlanganiswe kakhulu ku-DNA yethu futhi ngeke silungise noma yini. Kodwa-ke, kunezinye izici eziningana ezibalulekile ezithinta ukubonakala kwamakolesi amakhulu athatha ingozi:
I-Ultraviolet. Ukushisa kwelanga okunamandla kuzodlula phezu kwesikhumba nge-melanin, okuzoholela ekusungulweni kwamachashazi, futhi ngokuvamile kuvumise futhi kuyingozi;
Izifo ezithathelwanayo, izifo ezibangelwa amagciwane, ukulunywa kwezidakamizwa. Odokotela abaningi bakholelwa ukuthi lezi zici ezintathu zithinta nokubunjwa kwe-melanocyte ngokweqile;
I-Hormone - esinye isici esibalulekile esibangela ukuvela kwama-birthmarks angafuneki. Ukunyuka kwemisebenzi ye-hormone (isibonelo, ngesikhathi sokukhulelwa) kungaholela ekubukeni okungalawulwa kwamanaki amaningi e-melanin.
I-convex yokubeletha enganeni, uma kukhona ingozi?
Uma abazali benama-birthmark amaningi amaningi emizimbeni yabo, ngokuvamile bavele kubantwana futhi bakhathazeke ngakho, kodwa kungcono ukubonisana ne-oncologist kanye nodokotela wezidumbu okungenani izikhathi ezingu-1-2 ngonyaka, ngokubhalisa. Lokhu kuzosiza ukubona ubukhulu be-neoplasms, ukukhula kwabo kanye nezinguquko.
Ukwelashwa kwama-moles, ukuvimbela
Ngeshwa, ngaphezu kokungenelela okuhlinzekwayo nokususwa kwamakhwala ahlukumezekile ku-melanoma noma kulapho kunengozi yokuguqulwa ibe yindlala ebulalayo, ayikho enye yokwelapha. Odokotela banxusa abantu abanezinto ezibonakalayo ekubukeni kwezindawo zokudala ukuba bangahlali isikhathi eside elangeni, ungavakashele i-solarium, ungabambi ilanga. Ngakho-ke, ukubonakala kwama-moles amasha kunganciphisa kakhulu.
Ukwelashwa komuntu ocindezelekile
Okuthonya ukusebenza kwengqondo
Izindlela zokudla "okungavamile": ukulahlekelwa isisindo ngaphandle kokuphazamiseka nokucindezeleka
Ukuhlukunyezwa kwentsha: izimbangela nezindlela zomzabalazo
Ingabe kufanelekile ukugcina idayari eqotho
Indlela yokwenza imasese yesinaphi yokukhula kwezinwele?
Isingeniso sokudla okuhambisana nemifino
10 Izindlela Ezilula Zokuthola Umdwebo Omncane
I-Currant yokudla neqanda
I-cheesecake ne-Mascarpone ushizi
Ungashintsha kanjani indlu ukuze iqale ukudlala neminye imibala?
Amapancake anezithelo zokugcwalisa
Isaladi ngezindlebe zengulube
Ingabe kukhona ukuphila ngemva kwesahlukaniso?